Golaha Wakiillada oo Maanta Ansixiyey Miisaaniyada Qaranka 2009 | Somaliland.Org
March 30, 2009	Hargaysa (Somaliland.org)- Golaha Wakiillada Somaliland ayaa maanta Ansixiyey odoroska Miisaaniyada Dawlada ee Sanadka 2009.
Fadhiga Golaha Wakiillada ee maanta oo uu guddoominayay guddoomiyaha golaha mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) waxa ka soo xaadiray 47 xildhibaan, kuwaasi oo 40 ka mid ahi ogolaadeen miisaaniyadda, halka ay laba xubnood ka diideen, afar kalena ay ka aamuseen.
Odoroska Miisaaniyaddan oo wasaaradda Maaliyaddu sheegtay in ay ku salaysay miisaaniyaddii 2007, Islamarkaana qiimaheedu dhanyahay 291 bilyan oo Somaliland shilin ah ayaa mudanayaasha golaha wakiilladu intii ay doodeedu socotay waxay muujiyeen god-daloolooyin farabadan oo ka muuqda. Hase ahaatee, sidii ay wasaarada Maaliyadu ugu soo gudbisay ayay ku sii daayeen maanta iyadoon wax ka badal lagu sameyn, marka laga reebo lifaaq la raaciyey oo wasiirka maaliyadu ku ogolaaday sadex Bilyan oo lagu daray dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka, ka dib markii mudanayaasha Wakiilladu tilmaameen in ay aad Wasaarada maaliyadu aad u koobtay. Islamarkaana sidaad ay ku heshiiyeen Wasaarada iyo Goluhu.
Lacagtan lagu daray dhaqaalaha ku baxaya doorashada Madaxtooyada waxa laga jaray madax-xigaha Kaydka Qaranka waxana ay dhaqaalaha ugu jira Doorashadan ka dhigaysaa lacag ka badan 10.Bilyan s/sh.
Dhinaca kale, Fadhiga wakiillada ee maanta waxa lagu ansixiyey oo kale Xubin ka banaaneyd Gudiga Cadaalada, taasoo ay u tartameen laba xubnood oo kala ah, Jamaal Jaamac Xaamud iyo Maxamed Jaamac Cilmi. Waxaana ku guuleysay oo mudanayaasha ansixiyeen Jamaal Jaamac Xaamud oo helay 43 Mudane, iyadoo waqtigaas ay Golaha isku soo gaadheen 54 mudane.
Golaha Wakiilladu waxa uu galay fadhiga maanta Fasax Laba Bilood ah. ka dib markii uu hore u soo shaqaynayay laba bilood oo dheeraad ah, waxaana uu shaqada dib u bilaabi doonaa 1-da bisha Juun ee soo socota.